Naya Post Nepal | के हो मन्त्री आलेको ‘भाइरल’ अडियो का’ण्ड’को वास्तविकता र जोडिएको ५० लाख ! (भिडियो सहित)
के हो मन्त्री आलेको ‘भाइरल’ अडियो का’ण्ड’को वास्तविकता र जोडिएको ५० लाख ! (भिडियो सहित)
काठमाडौं । प्रेम आले अर्थात् आफ्नो बोलीबाट पटक–पटक वि’वा’द र चर्चामा आ’इरहने पात्र । उनी यति बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा उनले गरेका कामको समर्थन र आ’लो’च”ना व्या’पक छ ।
पछिल्लो समय उनले बोलेको शब्द ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले सोच्थे, अब आयो आले’ चर्चामा थियो । गए रातिबाट भने मन्त्री प्रेम आलेको एक गालीगलौचको अ’डियो ‘भा’इर’ल’ भएको छ । अछाम घर भई हाल भारतको मुम्बई बस्दै आएका जगत ओली नामका व्यक्तिसँग मन्त्री आलेको दो’हो’रो भनाभन भएको अडियो भाइरल भएको हो ।
अ’श्ली’ल श’ब्दको प्रयोग गरिएको उक्त अडियोमा सुनिन्छ । आलेले भने ओलीसँग त्यसरी कुराकानी नभएको आफुसँग ५० लाख माग गरेको र नदिएपछि थप केही कुरा जोडेर अडियो सार्वजनिक गरिदिएको बताएका छन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । आलेले पठाएको स्कृन सटमा पनि ५० लाख रूपैयाँ माग गरिएको पाइएको छ ।
तपाईंको अडियो सार्वजनिक भएको छ, त्यसमा थर्काएको तपाईंले नै हो ?
मेरो त्यो मान्छेसँग कुनै संवाद भएको छैन । विगतदेखि नै त्यो मान्छेले मेरोवि’रु’द्ध लेख्दै आएको थियो । म वनमन्त्री हुने बेला धेरैपटक उसले मलाई ट’र्च’र गर्‍’यो । फोन गर्ने, सताउने । रक्सी खाने ‘साइको’ जस्तो । धेरै गाली पनि गर्‍यो, त्यो पनि सहेँ । अनि मैले यस्तो गाली नगर बाबु भनेर सम्झाएँ । एडिगजस्तो रै’छ ।
त्यसपछि उसले पैसा माग्यो । अनि मैले केको पैसा भनेँ । २० हजार, ५० हजार माग्यो । अनि अडियो सार्वजनिक गर्दिन्छु भन्यो । त्यो त मेरो स्वरै होइन नि ।
त्यो अडियो तपाईंको होइन ?
त्यो मान्छेसँग कुराकानीचाहिँ भएको थियो ?
अँ, एकचोटि भएको थियो । पैसा पनि माग्यो । म त आफ छक्क परेको छु । सेयर पनि गरेको देखेँ । म आफ्नो ‘स्टेटमेन्ट’ दिन्छु । मैले देशको लागि राम्रो काम गरिरहेको बेलामा मलाई बदनाम गर्ने मनसायले यो काम गरिएको हो । म वनमन्त्री हुने बेला उसले मलाई फोन गरेको थियो, भारतबाट । त्यति बेला मुम्बई, अंधेरी भनेको हो । खै कसरी जोड्यो त्यो पछाडिको ।
ऊसँग एकपटक मात्रै कुरा भएको हो ?
तीन/चारपटक कुराकानी भएको हो, पहिल्यै । त्यसपछि मेरो कुनै कुरै भएको छैन । म त आफैँ छक्क परेको छु ।
मन्त्री हुनुअघिकै कुरा हो यो ?
होइन । वनमन्त्री हुँदा कुरा भएको थियो दुई÷तीनपटक । उसले मलाई गाली पनि गर्थ्यो । मैले गाली नगर्न भाइ भन्थेँ ।
तपाईंले गाली गरेको पनि सुनिएको छ नि ?
म काँ’ त्यस्तो गाली गर्छु र ? अचम्म परेको छु । फेरि, इन्डियाबाट उसले म्यासेन्जरमा कल गर्थो । अनि मैले दुई÷तीनपटक ब्लक पनि गरेँ । सर, खोल्दिनु न कुरा गर्नुछ भन्यो । एक वर्ष तनाव दियो । म वनमन्त्री हुँदाखेरिकै हो यो ।
तपाईंको चिनजानको व्यक्ति हुन् अडियोमा बोल्ने ?
अछामको मान्छे हो । फेस टु फेस अहिलेसम्म भेट भएको छैन । फोनमा मात्रै कुराकानी भएको हो । म्यासेन्जरमा फोन गरिराख्थ्यो । कैले त राति ११ बजे पनि । तनाव दिइराख्ने, कहिले रक्सी खाएर फोन गर्ने । मैले दुई/तीनचोटि डाटेँ (हप्काउए)को पनि छु त्यसलाई । यो कसरी आयो म त दंग परेको छु । उसले पैसा पनि मागेको छ, त्यो पनि म तपाईंलाई पठाइदिन्छु ।
पहिले को कुँवर भन्ने बोलेको थियो, पछि उसले मेरो साथी कुरा गर्ने भनेर त्यो जगतलाई दियो । फेरि त्यहाँबाट फोन गरेर गाली गरेको थियो त्यसपछि म पनि रिसाइदिएँ । साला ! फटाह को होस् तँ गाली गर्ने ! भन्ने हिसाबमा भनेको । यो काँ’बाट आयो अचम्म परेँ म त ।
-बाह्रखरी बाट साभार
***भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस***
२०७८ फाल्गुन ३, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 196 Views